Ngomkhuba we-nephrological, isifo sezinso - i-pyelonephritis - yisifo esivamile. Lesi sifo esingenasiphelo sithathelwana kakhulu, sisakazeka ku-parenchyma ye-renal, i-interstitium ne-pelvis yesitho. Ekuqaleni nasekuqaleni kwamanje ukuhlukanisa phakathi kwe-pyelonephritis engapheliyo futhi enamandla. Inqubo yokwelashwa, izinso ezilodwa noma zombili zingabandakanyeka. Futhi, lesi sifo singakhula njengezimele (okuyisisekelo) noma siqhubekele ngokumelene nesizinda sezifo ezikhona zamalungu angaphandle.
Ama-microorganisms abalulekile abangela lesi sifo yi-E. coli, staphylo- noma streptococci, protaeus. Eziningi iziguli ezinesimo esingapheli se-pyelonephritis, i-flora ixubekile. Ukutheleleka kwenzeka ngomzila okhuphukayo (kwi-ureters), kanye negazi. I-pyelonephritis elula Kungenzeka nge-stasis yomchamo, ngamatshe epulazini lezinso, phambi kwezifo ezixhumene nezifo kanye nokuzivikela komzimba obuthakathaka. Ngokuvamile ukuhlaselwa kwesifo kulandelwa i-nephritis efihliwe.
I-pyelonephritis enamandla i-interstitial, serous and purulent. Ukucindezela okunzima ukubunjwa kwe-carbuncle kanye nokuguquka kwe-nephritis ye-apostematous.
Ukubonakaliswa kwemitholampilo yesifo
Lesi sifo sinokuqala okubukhali, ngokuzumayo. Kubonakaliswa isikhathi eside, izinga lokushisa lomzimba liphakamisa izibalo eziphakeme (40 ° C), isiguli siyazikhukhumeza kakhulu, sikhononda ubuhlungu endaweni yokuhlola kwezinso, ukoma. Ukuxoshwa kwamasipha omzimba ovela eceleni okulimala izinso kanye nobunzima obunzima phakathi ne-palpation ekhoneni le-vertebral ebiza izindleko kungaqaphela. Ukuphulwa okuvame ukuvuthwa, ukunciphisa emthamo we-urine owehliwe, kungaba nokuhlanganiswa kwe-pus noma igazi. Ngenxa yokudakwa ngokweqile, ukuhlanza kwenzeka. Lapho uhlola isiguli, kukhona uphawu oluhle lwe-effleurage (Pasternatsky). Ukuhluleka kwezintambo kungase kwenzeke .
Ukuxilongwa ngokuthi "i-Acel pyelonephritis" ivuliwe ngesisekelo sezikhalazo, ukuhlolwa kanye ne-laboratory diagnostic data. Isiguli singase sibonise ukutheleleka okwamanje nje noma ukutholakala kwezifo ezingapheliyo ezivuvukalayo emzimbeni. I-pyelonephritis ephikisayo ingabangela ukuguqulwa kwamagciwane, kubantu besifazane izifo ezingapheliyo ezithombeni zobulili, emadodeni ukuba khona kwe- prostatic hyperplasia ngokuphulwa kokuphuma komchamo. Isici sesici se-pyelonephritis yikutholakala kokuphazamiseka kwamagciwane, ukuqubuzana komchamo noma ukutholakala kwegazi kuwo, nokuhlunguphazeka okubuhlungu kakhulu emuva kanye nomkhuhlane omkhulu. Noma kunjalo, kufanele kukhunjulwe ukuthi ukushintsha ukwakhiwa komchamo kungaba ukuphendula kwezinye izifo ezivuthayo.
Ekuhlaziyeni komchamo, ungabona inani elikhulu lama-leukocytes, ukwanda kwamaseli abomvu wegazi kanye nokuba khona kwama-bacterium. Emcinini, amaprotheni akhuphuka kancane.
Ngokuhlolwa kwe-ultrasound kwezinso, isakhi esithintekile sikhuliswa ngobukhulu, ukuhamba kwayo ngesikhathi sokuphefumula kunciphise kakhulu. I-Parenchyma ye-kidney edematous. Ezimweni ezingavamile nezimbi, i-abscess noma i-carbuncle yezinso ingabonakala kwi-sonograms edinga ukungenela okuhlinzekwa.
Ukwelashwa kwe-acelonephritis enamandla
Isiguli esine-pyelonephritis sitholwe esibhedlela emnyangweni we-nephrologic noma wezokwelapha esibhedlela. Nika inombolo yetafula 7. Kunconywa ukudla okukhulu ketshezi, okungenani amalitha amathathu ngosuku. Ukuphumula kobuhlungu kunqunyelwe izidakamizwa ze-analgesic kanye nama-antispasmodics. Izidakamizwa ezidingekayo ekwelapheni imithi yokwelapha. Esikhathini sokuqala sesi sifo, ama-antibiotic we-spectrum ebanzi alawulwa, futhi ngemva kokuhlukaniswa kwe-pathogen, imithi elwa namagciwane elwa nale microorganism. Ukwelapha ukumnika ukwenziwa ukukhipha utshwala, ukungafani, ukuhlukunyezwa kwemithetho kunqunywe. Indlela yokwelapha esebenzayo ephumelelayo i-phytotherapy.
Izingane Bulgaria Izibuyekezo umxhwele
Comedy "Bad Santa." Abalingisi kanye izindima